१ familiar परिचित आत्माहरू विरुद्ध छुटकारा प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स १ familiar परिचित आत्मा विरुद्ध छुटकारा प्रार्थना
17 तर सियोन मा पर्वतमा पर्दा हुनेछ, र पवित्र हुनेछ। र याकूबको घरमा तिनीहरूको सम्पत्ति छ।
परिचित आत्माहरू खराब प्रगति हो जो नरकको खाडलबाट तपाईंको प्रगति निगरानी गर्न र तिनीहरूलाई रोक्नको लागि पठाइन्छ। जसरी हामीसँग पवित्र आत्मा छ, शैतानको पनि दुष्टात्मा हुन्छ र उसले परमेश्वरका बच्चाहरू विरूद्ध खराब इंटेल चलाउँछ। हामीले प्रार्थना मार्फत उनीहरूलाई रोक्नु पर्छ। परिचित आत्माहरू पनि भविष्यको शक्ति (दर्शनहरू) पछाडि आत्मा हुन्, भाग्य बताउने ट्यारोट कार्डहरू, पाम रीडिंग र बोक्सी शिल्प। यी शक्तिहरूले केवल एक प्रार्थना कम ईसाईलाई रोक्न सक्छन्। आज हामीले बिरूद्ध १ 15 उद्धार प्रार्थना संकलित गरेका छौं परिचित आत्माहरु, यी प्रार्थनाहरूले तपाईंलाई डो guide्याउनेछ जब तपाईं यी प्रेतहरूको गढबाट आफूलाई बचाउनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो जीवनमा सबै निगरानी आत्माहरूमा ईश्वरीय बदला लिनु पर्छ।
यी प्रार्थनाहरूलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्, शैतान तपाईंको गन्तव्य पछि छ। जबसम्म तपाईं उसको विरोध गर्नुहुन्न, उहाँ तपाईंबाट भाग्नु हुने छैन। तपाइँको सम्पूर्ण हृदयले परिचित आत्‍माका विरुद्ध यो छुटकारा प्रार्थना गर्नुहोस्। विश्वासका साथ यसलाई प्रार्थना गर्नुहोस् र स्वर्गका भगवानले तपाईंको जीवनमा आज येशुको नाममा हस्तक्षेप गरेको आशा गर्नुहोस्। तपाईंको प्रगति अनुगमन गर्ने प्रत्येक परिचित आत्मा येशूको नाममा सँधै अन्धा हुनेछ
१. धन्यवाद पितालाई परिचित आत्माको बन्धनबाट छुटकाराको लागि प्रावधान गर्नु भएकोमा।
Familiar. म आफूलाई येशूको नाममा परिचित आत्माहरूको कुनै पनि बन्धनबाट स्वतन्त्र गर्दछु।
Lord. हे प्रभु, तपाईंको आगोको बन्चलाई मेरो जीवनको जगमा पठाउनुहोस् र येशूको नामका चिर-आत्माहरूले मेरो जीवनमा राखेका सबै दुष्ट चिपहरू नष्ट गर्नुहोस्।
I. म येशूको गर्भमा, गर्भबाट मेरो जीवनमा सार्ने कुनै समस्याको पकडबाट आफूलाई छुटाउँछु।
I। म येशूको नाममा मैले सामूहिक दुष्ट करारबाट आफूलाई अलग पारेको छु।
१०. म येशूको नाममा मैले हरेक सामूहिक श्रापलाई त्यागेको छु र आफूलाई छोडिदिन्छु।
१ family. मेरो परिवारको बिरूद्ध उठ्ने दुष्टको कुनै लौरो येशूको खातिर मेरो खातिर नपुंसक हुन दिनुहोस्।
अघिल्लो लेखमा२० लाभदायक रोजगारको लागि प्रार्थना बिन्दुहरू
अर्को लेखमा२० ताजा आगोको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
जॉन जोएल जुन 18, 2020 10 मा: 32 बिहान
तिनीहरू शक्तिशाली पुस्तकहरू हुन् जसले अन्धकारको शक्तिलाई नष्ट गर्दछन् र कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर सिकाउँछन्।
मारिया भान विक डिसेम्बर २,, २०१ At ११::21। अपराह्न
कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् टायर बसेर समलिose्गी समलिism्गी परिवारमा अश्लील छ एक बच्चाको रूपमा। कसरी शत्रुलाई पछाडि पार्ने भनेर सिक्न ईश्वरलाई नियन्त्रणमा लिन दिनुहोस्।
मिशेल एक Stonebraker मे १,, २०१ 14 बिहान :2021:१:7 बिहान
के तपाईंलाई थाहा छ बिरामी समस्याहरू हामीसँग भएको भए पनि हामीले येशूलाई भन्नु पर्दछ, यो हाम्रो शत्रुको पापको लागि जवाफदेहिताको तरिका हो र स्टानले यो तपाईंको विरूद्ध प्रयोग गर्न सक्दैन र हाम्रो परिवारको पापको लागि पश्चात्ताप गरेर प्रार्थना गर्न सक्छ विश्वासमा यदि तपाईंसँग यो पहिले नै छ
प्रभु येशू, तपाईंको मृत्यु र पुनरुत्थानको सार मलाई पापबाट स्वतन्त्र तुल्याउनु हो। तपाईंले क्रूस लिनुभयो, लज्जाको सडकमा जानुभयो, र आफ्नो बहुमूल्य रगतको साथ मुल्य मूल्य तिर्नुभयो जुन मैले व्यवस्थाको श्रापबाट बचाइन सकूँ। हे प्रभु, यो कति नराम्रो हुनेछ, कि हजारौं वर्ष पछि तपाईको मृत्यु पछि, म अझै पापको विषालु डुबाउँदै छु। धर्मशास्त्रीय पाठमा मैले सान्त्वना पाएको छु जसले यस तथ्यलाई जोड दियो कि हामी सत्य जान्दछौं, र सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। येशू, मैले सत्यलाई जानेको छु कि साँचो रूपमा तपाईले मर्नुभयो कि म पापबाट मुक्ति पाउन सक्छु, म स्वतन्त्रताको करारमा प्रवेश गर्दछु जुन तपाईको रगतको साथ कलवरीमा गरिएको थियो, र म येशूको नाममा पापबाट मेरो पूर्ण छुटकारा घोषणा गर्दछु।
स्वर्गमा बस्नुहुने बुबा, मेरो हृदयमा ठूलो सास परेको छ जब मैले थाहा पाएँ कि पापले कुनै मानिसलाई गुलाममा राख्नु बाहेक केही गर्न सक्दैन। येशू, म पापको दास भएर थकित छु र धार्मिकताको बाटोमा हिंड्ने संकल्प मैले लिएको छु। यद्यपि यो गाह्रो हुनेछ यदि पापको झुण्ड पछाडिबाट फुटिएको छैन भने, म कृपाको लागि प्रार्थना गर्दछु जसले मलाई पापमाथि विजयी तुल्याउँछ, प्रभु, म बिन्ती गर्दछु कि तपाईंले यो येशूको नाममा मलाई दिनुहोस्।
बाइबल भन्छ कि हामी पापमा हुन सक्दैनौं र अनुग्रहलाई अतिरिक्त हुन भनौं। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईं राजा हुनुहुन्छ किनभने तपाईंको करुणा सँधै रहन्छ। मेरो पाप र अधर्मको निम्ति तपाईंको कृपाको निम्ति म विन्ती गर्दछु कि तपाईंले मलाई देखाउन बनाउनुभएको छ। बाइबलले यो कुरा थाहा पायो कि पापीको अनुहारले ख्रीष्टलाई देख्नेछैन, प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्दछु कि कलवरीमा रगत बगाएको कारण, तपाईंले मलाई येशूको नाममा मेरो पापबाट सम्पूर्ण रूपले धुनु हुनेछ।
स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईंको वचनले यो प्रस्ट पार्‍यो कि तपाईं पापीको मृत्यु चाहनुहुन्न तर ख्रीष्ट येशूमार्फत पश्चाताप गर्नुहुन्छ। साथै, तपाईंले आफ्नो छोरालाई संसारको निन्दा गर्न संसार पठाउनु भएको होईन, तर उहाँकै मृत्युबाट मुक्ति पाउनलाई। म आज तपाईं समक्ष मेरा सबै पापहरु स्वीकार गर्छु, म एक गौरवशाली झूटा हुँ, चोर, म यौन अनैतिकतामा संलग्न छु। म यी सबै नराम्रा चीजहरूको गर्व गर्न सकेको छैन, तर मेरो पश्चात्ताप यति लामो समय सम्म टिक्दैन। यसैले गर्दा मलाई मेरो शरीरलाई काबूमा राख्न मद्दत गर्न तपाईंको सहयोगको आवश्यक छ जुन मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वमाथि कब्जा गर्न चाहन्छ। म कृपाको लागि प्रार्थना गर्दछु जसले मलाई पाप भन्दा माथि उठाउँदछ। प्रभुको नाममा प्रभु दया गर्नुहोस्।
हे प्रभु, पापले मेरो जीवनलाई ओझेलमा पारेको छ। यो गर्न बिना यो गर्न अनिवार्य रूपमा असम्भव भएको छ। खराब खराब, मँ ती बाहिर बाहिर घमन्ड गर्न सक्दिन, जबकि म तिनीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दिन बरु म मानिसमा शरम र निन्दाको सट्टामा। म भजनको पुस्तकमा बल लिन्छु जुन भन्छु कि मैले यो अधर्म गरें र यो तपाईंको दृष्टिमा गरें। हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ, जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ उसको उन्नति हुँदैन, तर जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ र उसलाई पछ्याउँछ उसले कृपा पाउँछ। म पूर्णतया पश्चातापको लागि खोजी गर्दछु, र अनन्त प्रभुले मलाई येशूको नाममा पापलाई पूर्णतया हटाउनको लागि अनुग्रह दिनुहुन्छ।
किनकि ख्रीष्ट मर्नुभयो, यो मेरो बिन्ती हो, पापले शक्तिलाई नियन्त्रण गर्यो, तर ख्रीष्टले मलाई यसबाट पूर्ण रूपमा बचाउनको लागि मर्नुभयो। म येशूको नाममा पाप निर्मूल पार्न तपाईंको शक्ति खोज्छु।
आर्थिक विकासको लागि प्रार्थना
नाइजेरियामा हत्याको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स